Yini ukusetshenziswa kwe-nylon ye-MC |
Inayiloni yokusakaza ingelinye lamaplastiki wobunjiniyela asetshenziswa kakhulu, ikakhulukazi entweni eyenziwe ngomshini njengempahla emelana nokugqoka nokunciphisa ukugqoka ukufaka izinsimbi ezingafakwanga insimbi ezinjengethusi nama-alloys. Umkhiqizo wenayiloni owenziwe ngamakhilogremu angama-400 unevolumu ebonakalayo elingana namathani wensimbi angu-2.7 noma amathani amathathu ethusi. Izingxenye ezingavumi ukugqoka zenayiloni esetshenzisiwe zisetshenziselwa ukufaka esikhundleni izingxenye zokuqala zethusi, ezingagcini nje ngokuthuthukisa ukusebenza kahle kwemishini, zinciphisa ukugcinwa okushelelayo, kepha futhi zandisa impilo yesevisi ejwayelekile izikhathi ezimbili noma ezintathu. Ngakho-ke, ikhotheshini ebiza izinto zokwakhiwa kwenayiloni iphansi, futhi ikhotheshini ishibhile kaningana kunezinsimbi ezingenayo insimbi. Imikhiqizo emikhulu yile: ama-gaskets epulasitiki, amashubhu enayiloni, amagaskethi enayiloni, izinduku zenayiloni, amagiya enayiloni, amasondo wokuhambisa inayiloni, amapulley enayiloni, njll.
Mayelana nokukhiqizwa, ingafakwa kusuka ku-0.2 kuye kumakhulu amakhilogremu. Ngenxa yezindleko eziphakeme zemishini yokubumba umjovo kanye nesikhunta, ukusetshenziswa kwenayiloni yipulasitiki entsha yobunjiniyela eyenziwe kulo nyaka. Inezinzuzo eziningi kune-polyamide ejwayelekile (inayiloni):
1) Amandla aphezulu emishini, ukumelana okuphezulu, ukumelana okuhle kokugqoka, iphuzu lokuncibilika okuphezulu, uwoyela wodaka, ukumelana nokugqwala nokumelana namanzi.
2) Ukuzinza kwesikali kuhle, okunezici zokuzenza bushelelezi, futhi isikali sosayizi asikhawulelwe.
I-3) Izindleko ziphansi, ubude bempilo bude, izindleko zingama-50% -70% kuphela zensimbi engeyona eyensimbi, futhi ubude bempilo buvame ukuphindwe izikhathi ezingu-2-3 kunaleyo yensimbi.
Inayiloni ye-MC inezinhlobo ezahlukahlukene zezinhlelo zokusebenza ezithile, njengama-turbines, amagiya, izinti zokugoqa kanye namapuleti wokuhambisa ngokuhambisa emishini ejwayelekile. Emishinini esindayo efana nemikhono ye-shaft kumishini yezimayini, ama-crusher, izinduku zokuxhuma, imikhono ye-shaft, imiphini kumishini yamakhemikhali, njll., Izinto zokufaka emishini yomshini wokubacindezela. Abasabalalisi bamanzi emibhoshongweni yokupholisa, izinduku zama-piston ezimotweni zokuhamba, ama-washer we-bee emishinini yengcindezi, amathangi kaphethiloli, amasongo okuvala uphawu, kanye nezinsimbi zomkhakha wezinsimbi, ukuvimbela imishini ukuthi ingene emathangini, njll. Kungakhathalekile ukuthi isetshenziswa njengengxenye yokudlulisela , ingxenye yamandla, ingxenye enciphisa ukungqubuzana, ingxenye yengcindezi, ingxenye yomhlobiso noma ingxenye yokusebenza, inconywa ngumsebenzisi.